Rivodoza Irma, Mamely Sahady an’i Porto Riko Efa Ianjadian’ny Fahasahiranana · Global Voices teny Malagasy
Rivodoza Irma, Mamely Sahady an'i Porto Riko Efa Ianjadian'ny Fahasahiranana
Voadika ny 07 Septambra 2017 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Türkçe, عربي, English
Pkantsary avy amin'ny lahatsary “Hurricane / Huracan Irma in Puerto Rico” nakarin'ilay mpampiasa YouTube, “Detodo Unpoco”.
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, ora vitsy lasa izay no nijanonan'ilay rivodoza Irma tao amin'ny tangoronosy Puerto Rico. Tena nahalalàna azy ny orambe mivatravatra sy tafiotra nentiny, ary mbola mikapokapoka takelaka hazo hiarovana ny varavarankeliny ny olona, nihazakazaka namonjy toeram-pivarotana niantsena tamin'ny minitra farany, nampiasa ny fampitàna mivantana tamin'ny Facebook sy nanao sorona ny ainy mba ho vavolombelon'ny hatsaràna mahafatin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny alon-drano.
Raha ny sasany mbola teo am-pankafizana farany ny chuleta frita y arroz con habichuelas [kisoa voaendy arahana vary sy voamaina], nilaza zavadoza ho an'ireo faritra sy tanàna sasany tao Porto Riko ny Manampahefana Miadidy ny Herinaratra (AEE), ny ratsy indrindra amin'ny fahatapahana herinaratra ary mety haharitra hatramin'ny 3 na 4 volana. Mbola eo an-dàlana ny famindràna ny olona any amin'ny faritra hafa any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana, toerana izay novinavinaina fa tena ho voa mafy amin'ny fandalovan'ny rivodoza Irma. Raha manana ny ampy ny sasany amin'ireo toerana fialofana, ny hafa kosa, toy ilay iray ao akaikin'ny nosy Culebra — nosy ambany fiadidian'i Puerto Rico — dia tsy ampy fotodrafitrasa famokarana herinaratra sy ireo filàna fototra hafa.
Loza voajanahary iray vao mainka manampy trotraka ny tsy rariny ara-tontolo iainana sy ny vesatry ny trosa
Nosazin'ny Filankevitra Mpanaramaso ny Kalitao ara-Tontolo Iainana (JCA) handoa sazy ara-bola ny Applied Energy Systems (AES), vondron'orinasa mamokatra angovo avy amin'ny arintany, noho ny tsy fanotofany araka ny tokony ho izy ireo lavenona feno poizina, AGREMAX (fifangaroanà avy amin'ny arintany voadotra) ary ireo fakonà arintany ararak'izy ireo sy vokariny eny akaikin'ny tanànan'i Peñuelas ary ireo tanàna sy faritra hafa manodidina. Tsy sarotra ho an'ilay rivodoza Irma sy ireo tafio-drivotra tropikaly miampy ny rano mikoriana ny hilalao ireo lavenona tsy voatototra, AGREMAX sy fakonà arintany, izay ho loza mananontanona ny fahasalamàn'ireo vondrom-piarahamonina maro dia maro.
Ankoatra izay, amin'izao fotoana izao i Porto Riko dia miatrika ny iray faran'izay henjana amin'ireo fahasahiranana ara-bola, sosialy sy politika teo amin'ny tantarany, trosa 74 lavitrisa dolara amerikàna ary 49 lavitrisa dolara amerikàna amin'ny resaka fisotroan-dronono tsy maintsy aloa. Ny taharon'ity trosa mahatsiravina ity dia ahitàna fanitsiana tetibola henjana, fepetram-pitsitsiana sy politika liberaly amin'ny endriny vaovao, vao mainka manaratsy ny fikororosiana mankany amin'ny fangozohozoana efa niainana nandritry ny am-polo taona. Tsy ampy intsony ny vola eo an-tànan'ny Masoivoho Federaly Misahana ny Vonjitaitra (FEMA), manatonga ny olona hanantena ny Kaongresy sy ny Antenimieran-doholona sisa mba hamerina ny fanohanana sy hanome vola misimisy kokoa.
“…amin'ny fanantenana fa mba hisy toetra mahaolona, na dia ho kely monja aza, hiverina aorian'izao zavatra rehetra izao.”
Mandritra izany fotoana izany, mezaka ny miomana hiatrika izay miseho ireo Porto Rikàna. Maizina ny hoavy, ary ny fahatsapàna fa manadino azy ireo, na ny governemanta na ny media, dia vao mainka manaratsy ny fahatsapàny tsy hafaliana. Araka ny soratan'i Maureen O'Danu, ny satan'i Porto Riko dia afaka jerena ihany koa amin'ny lanja omen'ny iraisampirenena sy Etazonia amin'ireo zava-mitranga sy fitarainan'ilay nosy, araka ny lazainy ao anatin'ny lahatsorany “Ao anatin'ny Mason'ny Rivodoza Irma Misy Fahanginana (Tafahoatra)“
Amin'izao ora izao, eto am-pitendrena azy ity aho, efa mamely an'i Porto Riko sy ao amin'ireo Nosy Virijiny (Britanika sy Amerikàna) ny lohan'ilay rivodoza Irma. Aleo averiko aminà fehezanteny hafa hoe : Amin'izao orao izao, eto am-pitendrena azy ity aho, efa mamely ao Etazonia ny rivodoza Irma. […] Eny, mety ho tena mandravarava tokoa ny faharavàna ao Florida na Georgia na Carolinas. Ary ho tantara goavana be izany. Saingy *izany* no tantaran'ny fandalovana mivantan'ity rivodoza ity nitety an'i Porto Riko, ilay faritra amerikàna misy anay natao tsinontsinona hatry ny ela, ary namakivaky ireo nosy virijiny amerikàna, faritra amerikàna iray hafa izay miankina amin'ny fizahantany mba ho fivelomany.
Miverina mijery ny tantara i O'Danu ary misaintsaina momba ireo tsy fitoviana amin'ireo fanjakàna hafa, ary milaza fa iray amin'ireo antony tsy maha-lohateny vaventy any ivelan'ilay nosy ny loza voajanahary manjo an'i Porto Riko ny fanavakavahana :
[…] noho ny fanavakavahana, rehefa mifoha isika rahampitso maraina, tsy hisy haka sary an-jatony momba ny faharavàna aty Porto Riko izany, izay “mbola ho ratsy lavitra” noho ny any Houston noho ny antony maro samihafa. Tsy ho rentsika ireo tantaranà asa famonjena, ireo tantaranà biby fanao ho namana. Tsy hanana orinasa goavana izany isika ka hoe hametraka pejy ho fangatahana fanampiana ho an'i Porto Riko ao amin'ny pejin'izy ireny ao amin'ny aterineto. Ny hany ho ananantsika dia aloka mahatsiravin'ny hoe “olondia mahantra, tsy tokony hisy zavatra ataontsika va re?”. Tànana mamitaka no ho hitantska, ary fanehoana alahelo sy fitserana .
Ary koa, ao anatin'ny tebitebin'ny fanomanana, manoratra i Kristen Fink hoe :
Ny tànako iray manoratra azy ity, ny iray hafa mitazona kaopy misy kafe Lareño. Manisa ny ora aho mandra-pivadiky ny tsy fihetsehana ho lasa korontana ambony ambany. Efa afaka marihako sahady ny fomba ataon'ny olona hitsitsiana tsikelikely ny vatoaratry ny findain'izy ireo mba ho amin'ny vonjitaitra. Zara raha misy mivazivazy izao, vaovao bebe kokoa mba tena misy fiantraikany, ary betsaka fanaovam-beloma. […] Afaka averin'ity zavadoza ity ho any amin'ny teboka fiaingàna daholo ny olona tsirairay, fiaingàna vaovao. Efa nilazàna handao ny misy azy ireo monina any amorontsiraka, mety hahatratra 10 metatra mahery ny haavon'ny onja ary ny herin'ny rivotra ho 67 m/s ; mety hiverina eny amin'ilay tendrombohitra iray feno fasika izy ireo, toerana nisy ny tranony fahiny. Betsaka varavarankely sy tafo tsy voaaro, noho ireo olona nonina tamin'izy ireny tsy nanana fahafahana hividy fitaovana hiarovana azy. Misy ireo lehibe manery ny olona handeha hiasa na dia efa izao toedraharaha mampididoza izao aza no iainana. Ny olona sasany tsy hisy herinaratra mandritra ny andro roa eo ho eo monja, raha ny hafa kosa tsy hanana trano ntsony mihitsy.
Antenaiko fa mba hisy toetra mahaolona, na dia ho kely monja aza, hiverina aorian'izao zavatra rehetra izao
14 ora izayEtiopia